nepaldoor.com: किन आए जिमि कार्टर ? किन गले कांग्रेस/एमाले ?
काठमाडौं (नेपाल डोर) । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिमि कार्टरले खोलेको संस्था कार्टर सेन्टर नेपालमा कहिल्यै पनि दर्ता छैन तर उसले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका कार्यालयहरुसरह सरकारी मान्यता पाएको छ । कार्टर सेन्टरका प्रतिनिधि वा कर्मचारीले बोलाउँदा शीर्ष नेतादेखि उच्च कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि लुरुलुरु भेट्न जान्छन् र भएभरका सबै सूचना शेयर गर्छन् । तर आइएनजीओको मान्यता पाउन उसले न्यूनतम क्राइटेरिया पनि पूरा गरेको छैन, शक्ति राष्ट्रका पूर्व राष्ट्रपतिको नाम आफैंमा बैधानिक भइदिएको छ नेपाल सरकारका लागि । होइन भने कार्टर यसपटक नेपाल आउँदा कुन मुखले र नैतिकताले राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष, शीर्ष राजनीतिक नेतादेखि निर्वाचन आयुक्तसम्मले चुनावी पर्यबेक्षकका लागि सभक्ति डण्डवत गर्नुको कारण के हो ?
पूर्व राष्ट्रपति कार्टर काठमाडौं आउँदा सरकारले उच्च सम्मान दिनु स्वभाविक छ । भीआईपी सरह उनलाई सम्मान र सुरक्षा दिनु सरकारको कर्तव्य हो तर उनका नाममा दर्ता नै नगरि आईएनजीओ वा संस्था चलाउन पाइँदैन । त्यसमा स्वयम् सम्मानित पूर्व राष्ट्रपतिले पनि चनाखो हुनुपर्छ । तर दर्ता नभएको कार्टर सेन्टरले यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत उछिनेर राष्ट्रपतिदेखि शीर्ष नेतासम्मलाई भेट्ने सेड्युल मिलाएको छ । भलै, औपचारिकताका लागि सरकारले कार्टरलाई स्वागत गर्न सहायक शिष्टाचार महापाललाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टसम्म पठायो । सरकारले न्यूनतम कर्तव्य निर्वाह गरेकै छ उनको स्वागतका लागि ।
कार्टरले व्यक्तिगतरुपमा नेपालको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न खोजे भने दिनुपर्छ । तर कार्टंरको पर्यवेक्षणको विश्वसनीयताप्रति नेपालमा व्यापक आलोचना भएको हो विगतमा । विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पंक्तिले कार्टरको विश्वसनीयतामा प्रश्न गरेको हो । किनभने निर्वाचन समाप्त भइनसक्दै कार्टरले सार्वजनिक गरे– संविधानभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र निस्पक्षरुपमा सम्पन्न भयो । हामी खुशी छौँ ।’ कार्टरले बोलेपछि कसले खण्डन गर्ने, सबै अन्तराष्ट्रिय निकाय, पर्यवेक्षकहरुले भने –चुनाव निस्पक्ष भयो । तर, समयक्रममा थाहा भयो कति फर्जी मत हालिए, कति हजार मृतकहरुका नाममा मत खसे र कतिहजार मतले जितेर नेताहरु काठमाडौं छिरे ।
तर, यो यथार्थ बिर्सेर बत्तिसपुतलीस्थित होटल द्धारिकामा तिनै नेताहरु सुशील कोइराला र झलनाथ खनाल लुरुलुरु गएर कार्टरलाई भने –निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न आउने तपाईँको इच्छालाई हामी सम्मान गर्छौँ र स्वागत गर्छौँ । त्यसका लागि पनि वातावरण मिलाउँछौँ ।’ अघिल्लो चुनावको पर्यवेक्षणप्रति चित्त दुखाएकाहरुले किन अहिले बिन्तिभाउ गर्नुप¥यो ? स्वयम एमाले कांग्रेसका नेताहरु अलमलमा छन् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण त, कार्टर यो बेला किन आए भन्ने नै हो । उनले मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष र राष्ट्रपतिसँगको वार्तामा समावेशीकरणको बढी मुद्दा उठाए । यहाँको समावेशीकरणसँग कार्टर महोदयको के स्वार्थ छ ? अथवा अमेरिकाको के स्वार्थ छ ? जबाफ हो अमेरिकाको दीर्घकालिन चीन विरोधी रणनीति । यो ओपन सेक्रेटजस्तै हो कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरुका भनाईमा । कार्टरले उम्मेदवारीमा समावेशिता, संविधानसभामा समावेशीताको कुरा गरेका छन् र अल्पसंख्यकहरुको प्रतिनिधित्वको सवाल उठाएका छन् । स्रोतका अनुसार अमेरिकीहरुको नजरमा अल्पसंख्यक भनेका यहाँका क्रिस्चियन समुदाय हुन्, र संविधानसभामा उनीहरुको जतिसक्दो धेरै प्रतिनिधित्व अमेरिकाको हितमा छ । त्यसका लागि कार्टरले सबैभन्दा उपयुक्त संगठन देखेका छन् एकीकृत माओवादी र जनजातिका नाममा खुलेका राजनीतिक समूहहरु । नेपाल भ्रमण सकेर कार्टर म्यानमार जानुले पनि अनेक अड्कलबाजीहरु उठ्न थालेका छन् ।